Updated: 2015-06-02 14:36
ဖုခုအိုကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဟာ မြို့လယ်ဖြင့်အလွန်နီးပြီး သွားလာရေးအဆင်ပြေသောကြောင့် အသုံးပြုသူများပါတယ်။ ဟကတဘူတာမှ ၁၀မိနစ်ဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးပြည်တွင်းဆိုက်ရိုက်ထွက်ခွာလေဆိပ်များကတော...
Updated: 2015-06-02 11:49
ဟကတရဲ့လှည့်ကွက်တစ်ခုလို့ခေါ်တွင်ရလောက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြဇာတ်မျာ၊ ခဘုခိများကျင်းပလေ့ရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မေလကုန်တွင် ဇွန်ဟကတဇခဘုခိကြီးကို ကျင်းပလေ့ရှိပြီး ဖျော်ဖြေကပြသူများဟာ ဟကတမြစ...
Updated: 2015-06-02 11:29
၁ထပ်စီမံချက်ပြခန်းတွင် ဖုခုအိုက၊ ဟကတနှင့်သက်ဆိုင်သော ရိုးရာလက်မှုပညာများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဟောပြောပို့ချချက်များရှိပါတယ်။ ၂ထပ်တွင်တော့ ဟကတအိုရိ၊ ဟကတအရုပ်လေးများကိုအဓိကထားပြသထားပြီး ဟကတရဲ့...
မရင်းဇုန်ဟာ ဖုခုအိုကမြို့၊နီရှိခု၊မိုမိုချိဟမတွင်တည်ရှိသော ကမ်းရိုးတန်းစီးပွားရေးဇုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်စာ စားသောက်ဆိုင်များ၊ မရင်းအားကစားပစ္စည်းဆိုင်များ၊ မင်္ဂလာဆောင်ခန်းမများကို ထိုဇုန်တွင် တွေ့...
Updated: 2015-05-28 16:41
ဖုခုအိုက ပါကို ဟာဖုခုအိုကရှိ ဖက်ရှင်မောလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တင်းဂျင်း၂ချောမဲတွင်တည်ရှိပါတယ်။ တင်းဂျင်းဘူတာမှ ၅မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်သွားရသောနေရာတွင်ရှိပါတယ်။
အိတိုရှိမား အွိုင်စတာ (မုတ်ကောင်)
အိတိုရှိးမားဒေသတွင် အွိုင်စတာအကင်ဆိုင်များရှိပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာစွာစားသောက်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာ ၂၁မှ ဧပြီလအထိ ပွဲတော်ကိုကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။
တွန်းလှည်းဈေးဆိုင်ငယ်များကို နဂဟမ၊ တင်းဂျင်း၊ နကဆု၊ ဟကတများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ညအလှများကိုခံစားနိုင်သောကြောင့် ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ အစားအစာများက ဆိုင်နဲ့လိုက်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။ လူကြ...
ရခိတိုရိဟာ ကြက်သားကိုအတုန်းသေးသေးတုန်းပြီး တုတ်ထိုးထားသော အသားကင်ဖြစ်ပါတယ်။ အရသာအတွက် ဆား၊ ချိုချဉ်ဆော့များဖြင့် တွဲဖက်စားသောက်နိုင်ပါတယ်။ ဖုခုအိုကရှိ ရခိတိုရိဟာ ကြက်သားသာမက ၀က်၊အမဲ၊ ကလီစာ၊ ဟင်းသီးဟင...